Xildhibaannada labada Gole oo si wada jir ah akhrinta koowaad u marsiiyay miisaaniyadda 2020ka – Kalfadhi
Xildhibaannada labada Gole oo si wada jir ah akhrinta koowaad u marsiiyay miisaaniyadda 2020ka
Xildhibaannada labada Gole ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya (Aqalka sare iyo Golaha Shacabka) oo maanta kulan ku yeeshay Muqdisho ayaa si wada jir ah uga dooday miisaaniyadda sanadka 2020-ka, iyagoo akhrinta koowaad marsiiyay miisaaniyadda.
Kulanka waxaa si wadajir ah u shir gudoominaayo gudoomiyaha Golaha Shacabka Mohamed Mursal Sheikh Abdiraxmaan iyo gudoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdullahi, waxaana soo xaadiray 171 mudane oo labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Kulanka wadajirka ah ee labada aqal ee Barlmaanka Federaalka Soomaaliya oo ay goob joog ka ahaayeen Guddoonnada labada aqal ayaa loo ballamay in markale la isugu soo laabto, Iyada oo Labada Guddi Maaliyadeed ee labada Aqal ay si wada jir ah uga soo shaqayn doonaan si akhrinta labaad loo mariyo Miisaaniyadda 2020ka ee dalka.
Labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya, ayaa ku dhowaad saddex kale kala maqnaa, waxa kulankoodii ugu horreeyay ee ay sida wada-jirka ah u yeesheen lagu tilmaamay mid socodsiinaya wada shaqeynta labada Aqal.
Shuruuc uu labada Aqalka soo ansixiyay ayaa qaarkood waxaa ay dhaqan-gal u noqon wayeen khilaaf soo kala dhex-gallay labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Sida u qabo qodobka 90-aad ee Dastuurka Madaxweynaha waxaa uu saxiixaa, shuucda ay soo ansixiyaan Baarlamaanka.
Waa imisa miisaaniyadda maamulka Puntland ee sanadka 2020-ka?
Shir u dhaxeeyay hay’adaha u xilsaaran dib-u-eegista Dastuurka iyo Beesha Caalamaka oo Muqdisho lagu qabtay